नेकपा फुटा'उन खोज्ने धो'केवाज र अप'राधी हो - भीम रावल -
नेकपा फुटा’उन खोज्ने धो’केवाज र अप’राधी हो – भीम रावल
प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७७, शुक्रबार ००:११
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावल आक्रामक बोलीका कारण लोकप्रीय छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम र अयोध्याको प्रसंग निकालेर मानिसहरुलाई भड्काउन खोजेको र कालापानीको विषय मोड्न खोजेको आरोप लगाए । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. रावलसँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
उहाँसँग सप्रमाण छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसको बारेमा सरकारमा छलफल गर्नुपर्छ । यो कुरा उहाँ आपूmले मात्रै भन्ने होइन । मैले तपार्इंं नक्साको कुरा त भनिहाले । त्यसभन्दा अर्को उहाँको कुनै काम देखिँदैन । त्यो नक्सा बनाउनको लागि हामी त्यत्रो दबाब दियौं । पार्टीले निर्णय नै गर्यो । धेरै समयपछि उहाँले नक्सा ल्याउनुभयो त्यसको लागि हामीहरुले धन्यवाद दिएकै छौं । यदि प्रधानमन्त्री त्यस्तो गम्भीर रुपमा छलफल, अनुसन्धान भएको छ तथ्य, प्रमाण नै छन् भने पहिला त पार्टीमै छलफल गर्नुपर्यो नि । पार्टीमा पनि अहिले उठाउने कि नउठाउने भन्नुपथ्र्यो । जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको काम के हुन्छ ? अनि कुटनीतिक रुपमा कुरा गर्न छोडेर जाने । नेकपाको दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकार भएको बेलामा गर्नुपर्ने काम चाहीं नगर्ने अनि अनावश्यक रुपमा देशलाई विवादमा हाल्ने र त्यो पनि एउटा औपचारिक भावना प्रकट गर्ने, औपचारिक निकायमा कुरा नगर्ने । त्यो जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने काम भएन नि ।
उहाँहरु अहिले एक त सत्ता र शक्तिको अन्धभक्ति गरिरहनुभएको छ । या त पार्टी भनेको केही पनि होइन । देशभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो । व्यक्तिको पद र बानी नै सर्वोपरी हुन् भन्ने यो सामान्ति संस्कारबाट ग्रसित हुन सबैले छोड्नुपर्छ । मैले जे कुरा उठाएँ, यो नेपालको प्राथमिकता पर्ने आवश्यक कुरा हो कि होइन ? यहाँ हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ भन्छौं । आफ्नो देशको सीमानाभित्र अर्को देशले आएर आफ्ना सेना राख्ने बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने गरेको छ । त्यसको समाधानको बाटोतिर लाग्नुपर्नेमा केही छैन । फेरि मैले दुई देशबीच युद्ध हुनुपर्छ भनेको होइन । अरु मुलुकमा सीमानामा अतिकथि यताउता हुँदा पनि कति ठूलो युद्ध भइरहेको छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा भारतसँग कुराकानी गर्ने, वार्ता गर्ने १९५० का असमान सन्धीका बुँदाहरु हटाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिलादेखि भन्दै आएका छौं । यस्ता कुरामा चाहीं कत्तिपनि काम नगर्ने अब यो कति हजार वर्षदेखि चलिआएको जुन एउटा पौराणिक कथा र धार्मिक ग्रन्थहरुमा आधारित त्यो कुरा ल्याएर विवाद गर्ने मानिसको भावना भड्काउने कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र डुबानमा परेर तराई, मधेसका जनताले पाएको दुःखबाट ध्यान अर्कोतिर मोड्ने काम बाहेक केही होइन । यसमा सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा के हो भने देशका समग्र जनताको ध्यान प्रमुखताको कुराबाट अन्यत्र मोड्ने खोजिएको छ ।
म लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने मान्छे हो । उहाँहरु जस्तो बुरुक्क उफ्रिएर तथ्यहीन तरिकाले अर्कोमाथि गालीगलौज गर्न मेरो नैतिकताले दिँदैन । म जुन पार्टीमा लागेँ त्यसबाट मैले जुन शिक्षा ग्रहण गरेको छु । त्यसैले कसैले उत्तेजना फैलाउँदैमा त्यसमा बहकिएर गालीगलौज गर्दिन । यसमा सामान्य कुरा भन्छु अहिले नेपालमा उत्पादित तरकारीहरु एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नसकेर किसानहरु मारमा परिरहेका छन्, पारीबाट भने ट्रकका ट्रक तरकारीहरु खुलमखुल्ला नेपाल आइरहेको छ । यत्रो कोरोनाको महामारी त्यो कहाँबाट आयो ? किन ल्याइयो केही लेखाजोखा छैन । अनि खोक्रा राष्ट्रियता, आत्मनिर्भरताका कुरा गर्ने ? आफ्ना देशका किसानहरु कोरोनाको मारमा परेर रोएर बसेका छन् त्यतातिर कसैले ध्यान नदिने अनि बेप्रसंगको कुरा गरेर जनताको ध्यान अन्यत्रा मोडेर वास्तविक समस्याबाट भाग्ने जुन हर्कत देखाउनुभएको छ । म यसमा कुनै नराम्रा कुरा भन्दिनँ । तर, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन समेत गर्नुपर्ने स्थिति आयो । अनि यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दैन ? किन त्यस्तो काम गरेको ? यो देशमा पार्टी, सरकार, यत्रा बुद्धिजीवी, नेताहरु छन् । उहाँहरुसँग कुनै छलफल गर्नुनपर्ने ? एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले जे पायो त्यो बोल्दै हिड्दा परराष्ट्र नीतिमा के समस्या आइपर्छ त्यतातिर ध्यान नदिने ।
यस्तै भएर मैले पहिलादेखि भन्दै आएको छु । यो पार्टी विधि, पद्धतिमा चल्नुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्र छ, परिपाटी छ, नीति सिद्धान्त छ । स्थायी कमिटि, केन्द्रीय कमिटि र सचिवालयको बैठकमा आउनुहोस् । आफ्ना विचारहरु राख्नुस् हामीले उठाएका विषयमा खण्डन गर्नुहोस् । अकाट्य तथ्यहरु छन् स्वीकार गर्नुहोस् । देशको सर्वोपरीलाई ध्यान दिनुहोस् । पद भएन भने पार्टी नफुटाउनुस् । निर्वाचन आयोगमा गएर आफ्नो मान्छेलाई खुसुक्क पार्टी दर्ता गराउन लगाए जस्तो काम नगर्नुहोस् । विभिन्न षड्यन्त्र गरेर पार्टी फुटाउने क्रियाकलापमा नलाग्नुहोस् । कोरोना रोकथामका सामाग्री खरिदमा भएका अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस् । हामीले उठाएका कुरा चित्त नबुझे खण्डन गर्नुहोस् । बैठकको बहुमतले उठाएका कुराको सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर त हामीले भनेकै छ त ।
कुनै पनि व्यक्ति सर्वशक्तिमान भएर म सबैलाई बडारेर एक्लै अगाडि जान्छु भन्ने कुरा सम्भव छ नेपालमा ? यो हुने कुरा हो ? उहाँ सर्वशक्तिमान भएँ भनेर सोच्नुभएको छ भने म त्यतातिर जान चाहन्न । म यत्तिमात्रै भन्छु अहिले मुलुकभर बाढीपहिरोले जनता आक्रन्त छन् । कतिपय घरवारबिहीन भएका छन् । कत्तिले सबै खाद्यन्न बगाएर खान र बस्ने अभावबाट गुज्रिएका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले ती पीडितको पक्षमा ढुक्कसँग काम गरोस् भनेर हामी चुप लागेको हो । पहिला पनि हामी कोरोनाको कारण हामी चुप लागेका थियौं । यी सबै समस्यामा छलफल गरेर काम गरेको भए राम्रो हुने थियो । उहाँ बैठकमै आउनुहुन्न । आइहालले पनि आफ्ना कुरा राखेर हिड्नुहुन्छ । अरुका कुरै सुन्नुहुन्न । अहिले बाढीपहिरोले मुलुक र जनता आक्रन्त छन् । प्रधानमन्त्री भने राम र अयोध्यामा पुग्नुभएको छ । त्यो पनि आपूmलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला । यही राम र अयोध्याको कुरा पनि उहाँले स्थायी कमिटिमा ल्याएर मैले राम र अयोध्याको बारेमा यस्ता कुरा भेटेँ साथी हो यो उचित हो कि होइन ? हामीले सीमाको विषयमा नक्सा प्रकाशित गरेका छौं ।
त्यहाँबाट भारतीय फौज हटेको छैन । बाटो सुचारु भइरहेको छ भनेर सल्लाह गर्नुपर्दैन ? अनि जे मनमा लाग्छ त्यो बोल्दै हिड्ने ?
बलियो हुनुहुन्छ भने राम्रो भयो त निर्णय गरे भइगयो नि । ल मैले उहाँको आलोचना गरेँ त्यसलाई स्थायी कमिटि बैठकको बहुमतले यो दिन भनेको फलानाको भनाई गलत भयो भन्दा भयो त । अनि पार्टीको विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्त नमान्ने । उहाँका समर्थक केही साथीहरुले जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद भन्ने साथीहरुले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको मेरो उपाध्यक्ष पद कहाँ गयो । त्यो दिनुपर्यो नि । महासचिव ईश्वर पोखरेलको पद कहाँ गयो ? युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य उहाँहरुका पद कहाँ गयो ? त्यो पनि दिनुपर्यो नि । यस्ता नचाहिने कुरा गरेर साथीहरुका मनलाई भाँडेर कुनै पनि जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले देश हाक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बैठकमै नबस्ने, अरुका कुरै नसुन्ने, आलोचना नसहने हो भने हिजो हामीले एकतन्त्री शासन किन हटाएको त ? त्यसको लागि हज्जारौंको ज्यान किन खेर फालेको त ?
यहाँ कसले दुवै पद लिने । कसले के पद छोड्ने, कसले कुन पद लिने भनेर बाहिर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने विषय होइन । हाम्रो स्थायी कमिटि छ । कतिपय साथीहरु भन्छन्, केन्द्रीय कमिटि जाऔं भन्नुहुन्छ । जाऔं न त जहाँ गएपनि पार्टीको प्रक्रियामा जाऔं । त्यहाँ त्यत्रा बुद्धिजी, अनुभवी नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । यत्रा विकेकसिल जनताहरु पनि छन् भन्ने विश्वास गरौं । अनि अरुले भनेको कुरै नसुन्ने मैले बोलेका र मलाई लागेका सबै ठीक हुन् भन्ने कुरा त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अझ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई सोच्न त सुहाउँदै सुहाउँदैन ।
एकदमै राम्रो पश्नगर्नुभयो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम चाहीं नगर्ने । मैले भारतबाट आएको तरकारीको कुरा गरेँ, तपार्इंंले मलको कुरा गर्नुभयो । अर्को समस्या सलह आएको छ हाम्रो देशमा । यसरी किसानमाथि समस्यामाथि समस्या थपिएका छन् । अब त्यो सलहलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने । त्यसले किसानलाई पु¥याएको क्षतिको कसरी परिपूर्ति गर्ने ? खेतीको सिजनमा सबै किसानलाई सहज ढंगले मलको आपूर्ति कसरी गर्ने ? आफ्नो देशमा उत्पादित तरकारीलाई बजारसम्म कसरी पुर्याउने । बाहिरबाट अवैध ढंगले भित्रिएका तरकारीलाई कसरी रोक्ने त्यतातिर ध्यान छैन । सीमानाको आफ्नो भूभागमा भारतीय फौज बसेको त्यसलाई कसरी हटाउने भनेर सल्लाह गर्नुछैन । अनि राम र अयोध्याको बहस चलाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने । अनि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको आफ्नै परराष्ट्रमन्त्रालयले खण्डन गर्नुपर्ने । भारतका कतिपय जनताले भारतले नेपालमाथि गरेको अतिक्रमणको समर्थन गरिरहेका थिए । त्यसलाई भड्काएर गलत सावित गराउन खोज्ने ? (रिपोर्टस नेपाल)
ट्रम्पले बोल्दै गर्दा ह्वाइट हाउस बाहिर चल्यो गो’ली
‘वैठकमा आउन डराउने नेताहरुले महाधिवेशन गर्लान् र ?’
लोकल र’क्सी र गाँजा बेचेर ‘नेपाललाई धनी बनाउने’ अभियानमा सांसद दम्पती
‘राम र अयोध्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सही छ’ – डा. जगमान गुरुङ
‘लरी लरी लै’ हिट भएपछि के भन्छिन कमला घिमिरे ? भिडियो सहित
भारतबाट चेकजाँच विना ह्वारह्वारी आउने दिने ? कोरोना ह्वात्तै आयो भनेर घोषणा गर्ने बाहेक सरकारसँग विकल्प के छ ? – डा. दीक्षित